Dood wadaaga: Milan ayaa qorsheyneysa inay talaabo yaab leh ku qaadato Pochettino - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Dood wadaaga: Milan ayaa qorsheyneysa inay qaaddo talaabo yaab leh oo ku aadan Pochettino
Daaqada suuqa kala iibsiga ee kooxaha ugu waa weyn Yurub ayaa xiran, laakiin halkan guji dhamaan dalabyada . Wareejinta Wadahadalka waxay sii wadi doontaa in ay la socoto warbaahinta adduunka iyo saxafiyiinta qulqulaya si ay u arkaan waxa ku jira ajandaha xagaaga.
Milan oo dooneysa inay Mauricio u dhaqanto
AC Milan waa inay bilowdo olole hufan oo loogu talagalay tababaraha Tottenham Mauricio Pochettino sida ku cad macluumaadka la daabacay Mirror .
Rossoneri Halyeeyga Gennaro Gattuso ayaa qarka u saaran inuu loo geliyo San Siro ka dib xilli ciyaareed niyad jab iyo Agaasimaha Guud ee cusub ee Milan Ivan Gazidis ku saabsan in ay bixiyaan Argentina farxad Sterling 300 million xabadka dagaal waa in ay isku dayaan si uu u soo jiito Spurs Gaffer Serie.
Madaxwaynaha Tottenham Daniel Levy ayaa isku dayay inuu ka dhaadhiciyo Manchester United inuu xiiseynayo xiisaha Pochettino. Real Madrid bilihii la soo dhaafay, waxaana ay rajeynayaan in heshiiska uu kooxda in garoon cusub aalladda casriga noqon doonaa ku filan si looga hortago in dhaqdhaqaaqa dheeraad ah iyada oo nin.
Laakiin Gazidis hoos waajibaadka cad inay la diriraan guusha tro A Taxanaha ee Juventus, samaynta Tababaraha xirfad tacliin heer sare Spurs, waxaa loo arkaa muhiim ah in shaqada agaasime ee Milan.
AC Milan waa inay bilowdo olole hami weyn u ah agaasimaha Tottenham Mauricio Pochettino. Getty
United waxay siisaa mudnaanta mustaqbalka ee goosashada hadda
Manchester United ayaa ka dhigtay mustaqbalka ragga la jecel yahay Paul Pogba et David De Gea mudnaanta koowaad ee xagaaga ka hor.
Pogba waa uu ku faraxsan yahay tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, laakiin wuxuu sheegayaa sheegashada Mirror Ole Gunnar Solskjaer ayaa u sheegay ciyaaryahanka reer Faransiiska inuu sii joogayo Old Trafford. Xiddiga reer Faransa ayaa labo sanno ka badan qandaraaskiisa United kula saxiixday qandaraaska dheeraadka ah ee 12.
De Gea ayaa xiran wadahadalada qandaraas ee uu kula jiro kooxda, halka uu doonaya inuu xiriir la sameeyo saaxiibkiisa Mushaarka todobaadlaha ah ee Alexis Sanchez's 500 000 £ . Taagan wadahadalo keentay ee Paris Saint-Germain, laakiin United ayaa dooneysa in ay sugaan markoodii in ay isku dayaan in ay ku tirinnaa heshiis hor dhammaadka heshiiska Spanish ee 2020 xagaaga.
Goobta booska waxay siinaysaa gaas oo bilaabaya ololka
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog/transfer-talk/79/post/3818786/transfer-talk-ac-milan-plan-surprise-swoop-for-spurs-boss-mauricio-pochettino
Foot OM - OM Garcia ma qabanayo shumac in Genesio, Beye ayaa rasaas lahaa - Olympique Lyonnais - cagta 01